Wararka Maanta: Khamiis, Jan 16, 2020-Madaxweynaha Puntland oo cafis u fidiyay odayaal xukun maxkamaddeed ku dhacay
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu tixgaliyay Xaaladaha Caafimaad iyo Da’ahaaneed ee xukumanayaasha cafiska loo fidiyay.
Waa markii labaad oo cafis loo fidiyo qaar kamid ah maxaabiistaan oo loo xiray kadib markii uu maamulku eedeeyay inay faraha kula jireen arrimo siyaasadeed iyo qalqalin lid ku ah ammaanka Puntland.
Dadka la cafiyay ayaa lagu kala magacaabaa:
1.5. Maxamuud Aadan Rooble ina Mumino Maxamud 60 Jir ah.
Xafiiska xeer ilaalinta guud ee Puntland ayaa soo diyaariyay Codsiga Cafiska Maxaabiista Xukuman, kadibna madaxweynaha ayaa oggolaaday oo amray in lasii daayo maxaabiistaan.
Maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari, ayaa dhawaan odayaashaan ku xukuntay xabsiyo udhexeeyay saddex bilood illaa 2 sano.